Al Ghurair University - Higher Education any ivelany ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra
fanafohezan-teny : AGU
Créé : 1999
mpianatra (eo ho eo.) : 1500
Aza adino ny discuss Al Ghurair University
Ny fandaharana ao amin'ny Al Ghurair natolotra University dia ny fenitra iraisam-pirenena sy mifanaraka hihaona olombelona fitakiana harena indrindra ao amin'ny GCC firenena sy maneran-tany. Ny diplaoma azo amin'ny AGU amin'ny fitsipika vao misondrotra no hanome anareo amin'ny fahalalana sy ny mitsikera, fifandraisana sy fahaiza-manao azo ampiharina sy ny traikefa izay mpampiasa mitady, manome anao ny tsara indrindra afaka ny mazava sy mahomby asa. Maro ny mpampiasa te ho manome fahafahana ny AGU internship mpianatra izay mamoha ny varavarana ho an'ny asa amin'ny fikambanana isan-karazany.
Ny tsenan'ny asa ny AGU nahazo diplaoma dia avo sy 85% ny nahazo diplaoma mahazo asa na ny fametrahana amin'ny ambaratonga ambony ny fandaharan'asa ao anatin'ny enim-bolana ny diplaoma
Amin'ny maha-mpianatra ao amin'ny AGU, dia manana kalitao avo-akademika tontolo iainana tohanan'ny toerana ho an'ny hetsika ara-kolontsaina ankoatra ny fianarana sy ny. Amin'ny sampam-pianarana ao amin'ny AGU dia avy amin'ny firenena samihafa, tena mahay sy za-draharaha.
Fankatoavana an-toerana - ny fandaharana rehetra nateriny AGU no deraina noho ny Ministeran'ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Siantifika Emira Arabo Mitambatra.
Fankatoavana iraisam-pirenena -Bachelor ny Siansa any elektrika sy Electronics Engineering (BSEEE) fandaharana dia deraina ny ABET – sampan-draharaha iraisam-pirenena fankatoavana izay manome anao fahafahana fianarana ambony any ivelany seamlessly.
Quality Assurance -AGU manana mahomby sy mahomby akademika dingana kalitao fanomezan-toky sy ny miezaka hatrany mba hanatsarana ny kalitaon'ny ny fandaharana amin'ny alalan'ny soa avy amin'ny torohevitra ny ivelany sy ny anatiny mpanome hevitra.
Ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny fandaharana ny AGU Anjerimanontolo iraisam-pirenena; Lakehead University, Kanada, Birmingham City University, UK, ary Universidad Catolica De Murcia, Espaina, manome ireo mpianatra ny fahafahana mba hahabetsaka ny lanjan'ny ny fampianarana amin'ny alalan'ny fandaharan'asa fiaviana roa ambaratonga raha mikatsaka fianarana ao amin'ny AGU.
Ny mpianatra afaka mahazo mizara roa ny diplaoma amin'ny AGU rehefa mianatra, na afaka hamindra nahazoan-dalana ny fandaharan'asa ao amin'ny oniversite, izay manana fiaraha-miasa fandaharana amin'ny AGU.
ankehitriny, ny mpianatra ny Tompon'ny Siansa in injeniera Management (MSEM), Tompon'ny Siansa in Information Technology Management (MSITM), Master of Business Administration (MBA) programa afaka na famindrana nahazoan-dalana na mahazo Tompon'ny Siansa in Enterprise Systems fitantanana avy any Birmingham City University, UK raha mbola nianatra tany AGU.
Ny MBA ireo mpianatra manana ny fahafahana manana mari-pahaizana hafa ao amin'ny MBA Sports Management natolotry ny Universidad Catolica De Murcia, Espaina.
Ny mpianatra ny Bachelor ny Siansa any elektrika sy Electronics Engineering (BSEEE) ary Bachelor ny Siansa any Computer Science sy Engineering (BSCSE) Afaka mahazo ny diplaoma avy any Birmingham City University, UK raha mbola nianatra tany AGU.
Ny fieken-keloka ny fianarana fandaharana ao amin'ny AGU dia tena hentitra loatra satria fandaharana ireny aterina amin'ny maraina, hariva, ary amin'ny faran'ny herinandro. Ny fandaharana nahazo diplaoma teny mamela na oviana na nanome teny ao amin'ny enin-teny pianarana taona.
Ny teny anglisy fanomanana fandaharana (EPP) amin'ny AGU dia ny hanampy ireo mpianatra hahazo ny fepetra takiana ho an'ny fidirana TOEFL ho fandaharana.
Ireo mpianatra izay tsy manana fampianarana Fizika, Simia, ary / na Matematika hatramin'ny sekoly ambaratonga faharoa dia manana ny vintana mba hiditra ao Engineering sy Bachelor maritrano fandaharana amin'ny alalan'ny fitsapana mandalo ny zava-tsarotra.
Computer Siansa sy Engineering
Ianao ve mila discuss Al Ghurair University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: Al Ghurair University ofisialy Facebook